Maalinta: 10 November 2019
Saacadaha Tareenka ee Ankara Istanbul: Tareenada xawaaraha-xawaaraha sare ku gala ee gudahayaga ah ayaa soo galay nolosheena, taasoo sahlaysa uguna raaxeysneyd inaan safro. Gaadiidka TCDD waxay sameysay dhammaan hal-abuurnimada iyo teknolojiyadda [More ...]
Saacadaha Magaalada Istanbul ee 2019: Dhamaadka 2030, iyadoo dhismaha tareenka dhulka hoostiisa laga bilaabayo sanadka soo socda, 776 waa metroga labaad ee ugu dheer adduunka kadib New York. [More ...]
Dhererka Wadada Wadada Dunida: Wadanka leh khadka tareenka ugu dheer waa Mareykanka Mareykanka halka 2014 km uu ku saleysan yahay xogta 293,564. Markaas khadadka ugu horumarsan uguna dheer adduunka [More ...]
Buundada tareenka ee 'The Horn Hornway', oo leh muuqaal markab shiraac ah, waa buundada ganaaxa oo xirxiran oo ka sarreysa Dahabka Dahabiga ah ee Istanbul, kaasoo u oggolaanaya marinka 'Wadada Yenikapı Metro Line'. Dhismaha 2 [More ...]
Dhibaatooyinka Gaadiidka Dadweynaha ee Van iyo Xallinta ayaa looga hadlay; Degmada Van Metropolitan, Gaadiidka iyo Isuduwidda Xarunta (UKOME) kulan caadi ah ayaa la qabtay. Kulan ay soo qaban qaabiyeen waaxda gaadiidka, gudoomiyaha degmada Edremit iyo degmada Van Metropolitan [More ...]
Sannadka 2020 wuxuu noqon doonaa sannad buuxa oo maalgashi Bursa; Duqa Magaalada Bursa Alinur Aktaş, Wasiirka Deegaanka iyo Qorshaynta Magaalooyinka Murat Kurum ayaa qiimeeyay warka wanaagsan ee Bursa. [More ...]
81 ee naga lumay Hogaamiyaha Weyn. In la joogo in dhammaan u doonaysa weli for Turkey Ata. Marka, 10 miyuu ka xor yahay gaadiidka dadweynaha bisha Nofembar? Bas, metrobus, metro iyo marmaray bilaash? 10 November 1938 saac [More ...]
Maanta taariikhda 10 November November 1923 waxay heshiis la saxiixatay Huguenin on Railroads Anatolian Railways iyo Ku xigeenka Nafia Muhtar.
Tapikule Tareen cusub oo Xawaare Sare ah